शिव विक : एकै दिन तीनवटा भिडियोमा कोरियोग्राफी – eSajha News
शिव विक : एकै दिन तीनवटा भिडियोमा कोरियोग्राफी
प्रकाशित मिति: ८ चैत्र २०७७, आईतवार १४:१३
८ चैत, काठमाडौं । टेलिभिजन-युट्युबमा प्रसारण हुने अधिकांश म्युजिक भिडियोमा एउटा नाम प्रायः जोडिएर आउँछ । त्यो हो, शिव विक ।
कोरियोग्राफर-नृत्य निर्देशकको रुपमा उनी निरन्तर गतिशील छन् ।
खासमा पप संगीतको जगमा उनले आफ्नो करियर उठाएका हुन् । राजेन्द्र सलभले उनलाई मौका दिए, एउटा गीतको नृत्य निर्देशन गर्न ।
नलिना चित्रकारको गीत थियो, ‘मेहेन्दी लगाउ मलाई, ऋङ्गारले सजाउ न ।’ २०५४ सालबाट उनले लोकदोहोरी गीतको कोरियोग्राफी सुरु गरे । त्यसयता उनले कहिल्यै विश्राम लिनु परेन । यो जाँगर, यो ऊर्जा, यो सिर्जनशीलता आखिर कसरी टिकिरहेको छ त ?
राजेश हमाल, भुवन केसीलाई लोकदोहोरीमा नचाउने शिव नै हुन् । आर्यन सिग्देललाई कोरस डान्सर बनाउने उनै शिव । तमामौँ म्युजिक भिडियो छन्, जसमा शिव विक जोडिएका छन् । आँखिर कस्तो पृष्टभूमिबाट उनले यो सबै गरे ?
शिवको संघर्षशील कथा छ ।
वि.स. २०५० साल । १७ वर्षको उमेरमा शिव विक चितवनबाट आठमाडौं आए । काठमाडौंमा उनका दाइ थिए । उनको दाइसँगै बसेर पढ्ने योजना थियो । तर, उनको मन नाचगानमा मन गइसकेको थियो । लेखपढमा कहाँबाट ध्यान जाओस । पढाइमा भन्दा नृत्यमा उनको झुकाव बढ्दै गयो ।
चितवनमा छँदा पनि उनी पूजाआजा वा सांगीतिक कार्यक्रममा पुगिहाल्थे । धुलो उडाएर नाच्थे । जसै काठमाडौं आए, उनले सुकिला र चम्किला मञ्चको दर्शन पाए । कहिले पुरानो नाचघर त, कहिले राष्ट्रिय सभागृह पुग्न थाले । जहाँ हरेक शुक्रबार र शनिबार नाटक तथा नृत्य प्रदर्शन हुन्थ्यो ।
शिवस्मरण गर्छन्, ‘मानिसहरुको भीडभाड लाग्थ्यो । म घुसेर भित्र छिर्थेँ । मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, किरण केसीलगायतका कलाकारले हाँस्य कार्यक्रम प्रस्तुत गर्थे । नृत्यका कार्यक्रम हुन्थे ।’
त्यहाँ उनी आफूलाई पनि नृत्यका लागि अवसर दिन आग्रह गर्थे । विस्तारै उनले त्यस्तास्टेज कार्यक्रममा समूहमा नाच्न पाए ।
पहिल्यैदेखि केही फरक काम गर्न चाहने शिवले नाचघरमा फरक खालको नृत्य देखाए । उनकै भाषामा ‘ट्युवलाइट डान्स’ थियो त्यो ।
‘आफ्नै ज्यानमा सिसा फोर्ने । मुखमा सिसा चपाउने, सिसामा हिँडने खालको डान्स थियो’, त्यो नृत्य गर्दाको तस्वीर देखाउँदै शिव भन्छन्, ‘त्यसबाट मैले पुरस्कारसमेत पाएँ ।’
स्टेजबाटै कोरियोग्राफीको अफर
स्टेज कार्यक्रममा थुप्रै चिरपरिचित अनुहार उपस्थित हुन्थे । शिव स्टेज कार्यक्रम गर्थे । नेपाली चलचित्रका चलेका अनुहारहरु अतिथिका रुपमा त्यहाँ आउँथे ।
एकदिन शिवको नृत्यबाट प्रभावित चलचित्र निर्देशक राजेन्द्र सलभले म्युजिक भिडियोमा कोरियोग्राफीको प्रस्ताव गरे ।
शिवले नलिना चित्रकारको आवाजमा ‘मेहन्दी लगाउ’ बोलको पप आधुनिक गीतमा मेलिना मानन्धरलाई नचाउँदै करिअर सुरु गरे । त्यो गीत राम्रो चलेको शिव बताउँछन् ।
शर्मिला वर्देवाको ‘काँस झै केश’ गीतमा कोरियोग्राफी गरे । यशकुमारलाई पहिलोपटक क्यामेरा फेस गराएको भिडियो आफूले कोरियोग्राफी गरेको शिवले बताए ।
शिवको कोरियोग्राफीमा ‘वनमा काँडा छ’, ‘माझीदाई पोखरा फेवातालको’, ‘वनको काफल वनकै चरीलाई’, ‘सररर पानी घट्टमा’ जस्ता एकपछि अर्को भिडियो आए
आफ्नो कोरियोग्राफी रहेको सिताराम पोखरेलको गीतमा आर्यन सिग्देल कोरस नाचेको शिव स्मरण गर्छन ।
क्रमश लगातार म्युजिक भिडियोमा कोरियोग्राफी गर्दै गए । शिवले लोकदोहोरी भिडियोमा कोरियोग्राफी गर्ने अवसर भने कृष्ण फिल्मस्बाट पाए ।
लोकदोहोरीतर्फ पहिलो भिडियो ‘घुम्तीमा पिपलबोट’ भएको शिव बताउँछन् ।
‘वनमा काँडा छ’, ‘माझीदाई पोखरा फेवातालको’, ‘वनको काफल वनकै चरीलाई’, ‘सररर पानी घट्टमा’ जस्ता एकपछि अर्को भिडियो आए ।
शिवको कोरियोग्राफी रहेका गीतहरु चल्दै गए । त्यतिबेला म्युजिक भिडियो कोरियोग्राफरमा आफूमात्र रहेको शिव जिकिर गर्छन ।
दिनमा लोकेशन मिलाएर २-३ वटासम्म भिडियो छायाँकन गरेको उनको दाबी छ ।
स्टेज कार्यक्रममा एकैपटक धेरै कलाकार लाई नचाए पनि भिडियोमा तीनजना नचाउने प्रचलन थियो ।
शिवले ५ जना कलाकारलाई एकैपटक नचाए । पछि मुख्य मोडल राख्ने प्रचलनको सुरुआत भयो ।
शंकर बिसी चलचित्रको कोरस तथा स्टेजमा नृत्य गर्दै आएका थिए । शिवले शंकरलाई ‘पूर्वेली ए कान्छी’ बोलको गीतमा मोडलका रुपमा नचाए ।
४० जना कोरस राखेर शंकर र कविता थपलियालाई भिडियोमा नचाएको शिवले बताए । यो २०६३-६४ सालतिरको कुरा भएको उनको भनाइ छ ।
पछि शंकरले नै उनलाई पछाडि पारे । आफैँ नाच्ने, आफैँ निर्देशन गर्ने भएकाले एक समय शंकरले लोकदोहोरी भिडियोमा एकलौटी राज गरे ।
त्यसपछि पनि केही निर्देशकहरु आए । केही निर्देशकहरु हराए । तर, शिव दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि कोरियोग्राफीमा सक्रिय छन् । शिवको कोरियोग्राफी रहेको ‘सालको पात टपरी’ पछिल्लो समयको लोकपि्रय गीत हो ।
उसो त शिवको सक्रियता लोकदोहोरी म्युजिक भिडियो कोरियोग्राफीमा मात्र रहेन् । चलचित्रमा समेत शिवले काम गरे । डेढ दशक अगाडि चलचित्र ‘बारुद’को गीतमा शिवले कोरियोग्राफी गरे ।
दुई वर्ष अगाडि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘प्रसाद’को ‘वनकी चरी के भन्छे’ गीत शिवले नै कोरियोग्राफी गरेका हुन् । ‘छ माया छपक्कै’को गीतमा पनि शिवले कोरियोग्राफी गरे ।
अन्य दर्जनौं चलचित्रमा कोरियोग्राफी गरेको शिव सम्झन्छन् । केही भोजपुरी चलचित्रका गीतहरुमा समेत कोरियोग्राफी गरिसकेका उनले आजसम्म पाँच हजार गीतमा कोरियोग्राफी गरेको बताए ।
राजेश हमालदेखि भुवन केसीसम्मलाई लोकदोहोरीमा नचाए
लोकदोहोरीमा चलचित्रका कलाकार कमैले काम गरिरहेको समय थियो । चलचित्रका कलाकार लोकदोहोरी भिडियोमा अभिनय गर्न हिच्किच्याउँथे ।
त्यही समयमा शिवले चलचित्रमा चलेका नायक-नायिकाहरूलाई लोकदोहोहोरी गीतको भिडियोमा नचाउन सुरु गरे ।
शिवले २०६०-६१ सालमा शिव श्रेष्ठ, भुवन केसी, धिरेन शाक्यलाई लोकदोहोरीमा नचाए ।
शिव श्रेष्ठले ‘के हुन्छ कुन्नी’ बोलको लोकदोहोरी गीतमा अभिनय गरे । त्यस्तै भुवनले ‘पानमा पराग छ’ बोलको गीतमा अभिनय गरे । अभिनेता धिरेनले सुरुआतमा ‘सररर पानी घट्टमा’ बोलको लोकगीतमा अभिनय गरेको शिवले जानकारी दिए ।
पहिल्यैदेखि केही नयाँ र फरक काम गरौं भन्ने सोँच राख्दै आएका शिव त्यही सोँचका कारण चलचित्रका कलाकार लाई लोकदोहोरी भिडियोमा अभिनय गराउन लागिपरेको बताउँछन् ।
चलचित्रका कलाकारहरुलाई लोकदोहोरीमा खेलाउनुको मुख्य कारण भने लोकदोहोरीप्रतिको हेराई परिवर्तन गर्नु रहेको उनले बताए ।
अफर गरेको २ वर्षपछि राजेशले राजु परियार र विष्णु माझीको ‘कस्तो अचम्म’ बोलको भिडियोमा अभिनय गरेका थिए
शिवले अभिनेता राजेश हमाललाई लोकदोहोरी भिडियोका लागि प्रस्ताव गरे । राजेश व्यस्त भएकाले उनलाई लोकदोहोरीमा खेलाउन दुई वर्ष कुरेको शिव बताउँछन् ।
अफर गरेको दुई वर्षपछि राजेशले राजु परियार र विष्णु माझीको ‘कस्तो अचम्म’ बोलको भिडियोमा अभिनय गरेका थिए । शिव भन्छन्, ‘राजेश दाइ चलचित्रमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । त्यो समयसम्म पनि लोकदोहोरी भन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउने गरिन्थ्यो । मैले दुई वर्ष कुरेरै राजेश दाइलाई पहिलोपटक लोकदोहोरी भिडियोमा अभिनय गराएँ ।
दुई वर्ष अगाडिमात्र उनले निखिल उप्रेतीलाई ‘धानको चामल धानको चिउरा’बोलको लोकदोहोरी गीतमा नचाएका छन् ।
उनी लोकदोहोरीप्रति रहेको हेयको भावना हटाउन चलचित्रमा नाम चलेका कलाकारलाई भिडियोमा अभिनय गराएको बताउँछन् ।
अहिले सबैको आकर्षण
‘सालको पात टपरी’मा पनि धेरै अभिनेत्रीले अभिनय गर्न अस्वीकार गरेको उनलाई सम्झना छ । भने, ‘सातको पात टपरी’मा पनि थुप्रै अभिनेत्रीकहाँ प्रस्ताव लगेर पुगेको थिएँ । तर, धेरै अभिनेत्रीले नमानेपछि मरिष्का पोखरेलले काम गर्नुभएको हो ।’
केही चलचित्रमा अभिनय गरेर पाएकोभन्दा सो गीतले मरिष्कालाई कयौं गुणा परिचित बनायो ।
शिवले थपे, ‘त्यसपछि लोकगीत नसुन्नेहरुले पनि लोकगीत सुन्न थाले । लोकगीत नहेर्नेहरुले पनि लोकगीतको भिडियो हेर्न थाले ।’
पछिल्लो समय चलचित्रका धेरै कलाकार लोकदोहोरीको भिडियोमा अभिनय गर्न थालेका छन् । धेरै नायक नायिकाले लोकदोहोरीमा अभिनय गरिसकेका छन् ।
शिव यसलाई लोकदोहारीप्रति आकर्षण बढेको रुपमा हेर्छन । अहिले अधिकांश कलाकार लोकदोहोरी भिडियो खेल्न राजी हुने शिवको अनुभव छ । अहिले लोकदोहोरी भिडियोको स्तरीयता पनि बढेको उनी बताउँछन् ।
उनी आफू म्युजिक भिडियोबाट पैसाभन्दा पनि सबैको माया पाएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘पैसा पनि कमाए । तर, त्यो बचाउन सकिएन् । मैले यसबाट कमाएको भनेको दर्शक, कलाकार तथा शुभचिन्तकको माया हो ।’ उनी दर्शकको मायाकै कारण आफू लामो समय टिकिरहेको दोहोर्‍याउँछन् ।
‘म कामलाई प्राथमिकता दिन्छु । मैले यो क्षेत्रलाई विजनेशका रुपमा हेरेको छैन्,’ काठमाडौं बल्खु निवासी शिवले भने, ‘अर्को कुरा धैर्यता हो । बीचमा धेरै निर्देशक आउनुभयो, जानुभयो । मैले काम नपाउँदासमेत अन्यन्त्र गइन् ।’ आगामी दिनमा पनि आफू म्युजिक भिडियोबाट अन्यन्त्र नजाने शिवले प्रतिवद्धता गरे ।
८ चैत्र २०७७, आईतवार १४:१३ मा प्रकाशित